Fitaovana fanondrahana indostrialy - Cutterhead & swinging Ladder Dredges
Ellicott Dredges dia namolavola ary nanamboatra dredge sy fitaovana fanodinana natao hampiasaina amin'ny sehatra isan-karazany sy ny tsena toy ny fasika sy ny gravelging, ny fitrandrahana ny tany ary ny seranana ary seranan-tsambo. Ny tohatra fihenan'ny tohatra dia ampiasaina amin'ny famerenana sy ny tontolo iainana ary ny lakandrano lakandrano. Mila zavatra fanao? Na mila fanampiana amin'ny famaritana ny dredge mety ho an'ny tetikasa ataonao? Antsoy +1 410-545-0232 na hamita ny antsika endrika fampahalalana momba ny tetikasa, ary hifandray aminao ny eken'ny varotra mivarotra mba hiresaka ny zavatra ilainao.
Isaky ny mpanjifa voafaritra